Ajajaan waraana ABO Shanee Zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dheengee waamiicha Mootummaan dhiyeessee fudhachuun gara Itiyoophiyaatti galanbilissumaadhaan socho’aa jiraachuun isaanii ibsame. – ዜና ከምንጩ
Mootummaadhaaf harka isaanii kan kennanajajaan ABO Shanee Godina kibbaa Jaal Goollicha Dheengee karaa nagaa socho’aa jiraachuu isaanii qondaalttonni mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Maaladaaf ibsan.
Ajajaan ABO shanee harka isaanii kennan garee ABUT mana maree bakka bu’oota ummataanShorokeessaa jedhamee waliin socho’aa kan ture ta’uus amma haala nagaadhaan simannaantaasiifameefii ummata isaanii fayyaduuf hojjechaa jiraachuudha qondaalttonni naannichaa kan dubbatan.
Jaal Goollicha Dheengee GareeABO Shanee irraa adda ba’anii mootummaaf harka isaanii akka keennaniifii walitti dhuufeenya kanaan dura garee shororkeessaa ABUT waliin qabaniin rakkoon tokko iyyuittu isaan hinmudatin bilisummaadhaan socho’aa jiraachuu isaanii iddoowwan tokko tokkottis dawwaannaa taasisaa jiraachuu isaanii Obbo Geetaachoo Baalchaa Itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Addis Maaladaatti himaniiru.
Itti gaafatamtichii itti dabalaniis humnoota hidhattoota ABO Shanee garee shororkeessaa ABUT tti makaman Mootummaan karaa nagaa akka simatuun kan beeksisan yammu ta’u Jaal Goollicha Dheengee gara biyya isaattidebi’aaraeergii biyya isaattidebi’eimmo qabsoo nagaa isa barbaachisu geggesuu danda’a jedhaniiru.
Addis Maaladaan itti gaafatamtichi irraa kan hubattee Jaal Goollicha amma mille garee ABUT haleellaageessisu waliin kan ture ta’us karaa nagaa nan socho’aajedhee mootummaadhaaf harka isaanii kankennaniin ta’u isaaniitiin gaaffiin akaakuu kami iyyuisaaniitti ka’u akka hinqabnnefi qabsoo nagaa itti fufuu kan danda’an ta’u isaatii/
Wayita kana Jaal Goollicha harka isaanii kennuudhaaf kan murteessuun walii galtee ABO Shanee garee ABUT mootummaa federaalaa tiinshororkrssittumaatiin ibsame waliin jalqabee fudhachuu dhabuudhaan kanaan booda Ummanni Oromoo bosonataa’u hin qabuu murteejedhu murtessudhaan akka ta’e ta’u obbo Getaachoon kan ibsan.
Gareen mootummaa federaalaatiinshororkkessitumaadhaan ibsame jalqaba biyya jeequu yammu jalqabuu garewwan akka isa gargaaran adda baafateekessaa gareen ABO Shanee isa ol’aanaa ture jachuudhaan kan ibsan itti gaafatamaan kun garee kana irraa adda bahuun Jaal Goollolchaa humna aleellaagare ABUT ni laaffiisa jachuudhaan yaada isaanii ka’aniiru.
Getaachoon itti dabalaniis garee kana irraa adda bahuun ajajaa ABO Shanee laafiinsa waraanaa Itiyoophiyaa irratti mula’atuufshorakan qabu ta’e dhiibbaa aalaabiyyattirra jiru hiri’isuu danda’a jechuudhaaniidha yaadasaanii kan ka’an.
Itti gaafatamttichii itti dabalaniis gareen ABUT kutaa biyyatti kaabaatti aleellaa yammu raawatuu gareen ABO Shanee shora guddaa qabatee turu isaa kaasaniigariichii kanaan booda gara qabsoo nagaatti debi’u akka danda’u dubbataniiru.
Harka kennuun Jaal Goolliicha karaa Mootummaa gaaffii qabsiichiiboosoonaa gara galmaattihaa galu jedhuu jiru kandebisuduulabirmadummaa eegsisuu biyyatti karaa kaabaa jiruuf xiyyeeffannaa kenninee tumsuu akka danddenyu kan gar gaaruudhajechuudhaa itti gaafatamttichii dabalaniis dubbataniiru.
Ajajaan ABO Shanee Godina kibbaa Jaal Goollicha Dheengee wayita kana garee kana irraa adda ba’uun isaanii waraannibiyyattikessattigaggefamaa jiru sirri ta’u dhabuu isaa amanuudhaan jechuudhaan ragaa kan ba’an Getaachoon Murtii isaan fudhataniisjajjabeesaniru.
Namnnii waan seeraan dhawwammee tokko raawatuukamuu seeraan gaafatamtuu jala darbuu kan danda’u akkaataa seeradhiifamaatiin akka ta’e kan ibsan Miseensii abbaa alangaa waliigalaa federaalaa tokko dhimma Jaal Goollolcha Dheengee irratti dubbachuuf yeroo dheeraa akka barbaaduuibsaniibaallama yoo nukeenaniis akkaataa baallama isaaniitiin amma gaazeexaankuunmaxxansaaf geessetti deebii nuukeennu hin danddenye
Total views : 6693435